ORCHID CUMBRIA: DARYEELKA GURIGA, SAWIRKA - SOOSAARKA DALAGGA
Daryeelka orchid Cumbria guriga
Orchids waxay had iyo jeer joogaan waxayna ahaan doonaan kuwa ugu jecel ubaxlaha. Dhirta quruxda leh ubax aad u qurux badan had iyo jeer qurxin guriga iyo farxad isha. Hadda waxaan tixgelinnaa sifooyinka iyo xeerarka daryeelka ee noocyada orchid "Cumbria". Waxaad hubaal noqon doontaa ubaxkan aan caadiga ahayn.
Cumbria waa ubax isku dhejisan adoo soo maraya saddex nooc oo ah orchids, kuwaas oo:
Miltonia (latin Miltonia), ama duumo;
Brassia (Brassia) "Orange-spider Orange";
Ma taqaanaa? "Cumbria" sidoo kale waxaa loogu yeeraa "asterisk" sababtoo ah isbarbardhigga aan caadiga ahayn ee ubaxa leh xiddigga.
Cumbria waxay leedahay midab kala duwan oo ah midabyo; Dad badan ayaa si qalad ah u maleynaya inay kuwani yihiin noocyo kala duwan oo orchids ah. Dabeecadda dibadda "Cumbria" waa sida soo socota:
Noocyada nafaqada ah (nafaqooyinka ku yimaada samatabbixinta inta lagu jiro muddooyinka xad dhaafka ah ee koritaanka dhirta);
caleemaha cidhiidhiga ah iyo cawska;
"Cumbria" waxaa loola jeedaa orchids sympodi (tani waa marka mid ka mid ah labada fiilo lateral ee foomka warshadaha si dhakhso ah in ay qaadataa jihada ee ugu weyn, taas oo ka dhalatay taas oo kale beddelid ama dhiman);
Noocyada caanoodka leh waxay leeyihiin qaab muuqaal ah, si wanaagsan ayaa loo sameeyay waxayna gaareen dherer 8cm;
2-3 pseudobulbs leh caleen cagaaran oo leh caarad dhexda ah ayaa la dhigaa iyaga, waxay ku dhowaad 50 cm dheer;
Ubaxa wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan oo midabyo ah oo dhexmaray dhexroorka 50 mm ilaa 10 cm.
Si ay u koraan "Cumbria" waxay doorbidaan dhinaca bari, woqooyi-bari ama galbeed. Haddii daaqadaha ay eegaan koonfurta iyo koonfur galbeed, ka dibna orchid (xagaaga) waa in lagu xiiraa faashad ama dhar kale. Caleemaha ubaxa waa mid aad u xasaasi ah: haddii aad sameyso waraabinta roobka, waxay ku jiri karaan dhar. Sidoo kale dhaawaca aan loo baahnayn caleemaha wuxuu keenaa in si toos ah loogu garaaco qorraxda qoraxda.
Ma taqaanaa? Inkasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo orchids ah - qiyaastii 35 kun oo nooc oo dhirtaas ah ayaa loo yaqaan - dhammaan ubaxyadooda, kala duwanaanta qaabka iyo midabka, ayaa loo habeeyay si isku mid ah. Ubax kastaa wuxuu leeyahay saddex sepal iyo saddex tufaax ah, mid ka mid ah taas oo ka muuqata mid weyn oo ka sii fiican labada kale.
Muddo wanaagsan oo loogu talagalay taranka "Cumbria" waa bilowga guga (bisha Maarso - horraantii Abriil). Wakhtigan, waxay isku diyaarineysaa in ay ka baxdo nasasho nafleyda. Orchid waa in la faafiyaa ka dib marka la barbardhigo. Dhaqan ahaan, "Cumbria" waxay faafinaysay qaybta baadiyaha.
Habka loo qaybinayo baadiyaha:
ku qoyso nidaamka xididka ee ubaxa (si looga fogaado waxyeelada ay xididdo u leeyihiin jilif ama qaybo kale oo ciid ah);
nadiifinta qalabka (dabka ama alkolada) ee aad isticmaali doonto;
ka saar sharooto orchid cayayaanka;
si taxaddar leh u kala qaybin kaynta ilaa 2-3 qaybood, isku day inaadan waxyeeleynin xididada;
gooyay caleemo iyo waxyeelooyin kale oo leh budada dhuxusha;
Iska daa aasaaskii dhulka waagii hore iyo qalalan;
beerista geedka cusub.
Xeerarka daryeelka "Cumbria" waa mid sahlan oo aan dalban, sababtoo ah gardarrada waxaa la abuuray rajada ah dayactirka guryaha caadiga ah.
Baro xubno ka mid ah qoyska Orchid sida Cattleya, Phalaenopsis, Wanda, Cymbidium, iyo Bletilla.
Heerkulka ugu wanaagsan ee orchid waxay u dhexeysaa 15 ° C ilaa 25 ° C. Waxay ku habboon tahay heerkulka maalinlaha iyo habeenba. Haddii aad rabto in orchid aad si dhakhso ah u kobciso, waxaad siisaa heerkulka qabow ee qabow (15-20 ° C). Iftiiminta for orchid waa in la doortaa leh gudbin wanaagsan oo wanaagsan, sidaas ubax noqon doonaa mid aad u fiican, iyo ubax naftooda noqon doonaa weyn. Isla markaa, "Cumbria" waxay u baahan tahay in laga ilaaliyo qorraxda tooska ah - waxay ku gubaan caleemo jaban, waqti ka dib, waxay bilaabaan inay noqdaan huruud (xaaladdan, ubaxa waa in loo wareejiyaa meel kale).
Waa muhiim! Xilliga qaboobaha, orchid intiisa badani waxay u baahan yihiin gudbinta iftiinka wanaagsan, sidaas darteed waxay u baahan tahay in loo wareejiyo meesha ugu ifaya. Haddii ay lagama maarmaan tahay, waxaad isticmaali kartaa phytolamps.
Qoyaanxilliga nasashada nafleyda oo aan loo baahnayn. Orchid ficil ahaan looma waraabin, sababtoo ah xilligan xilliga guga ayaa la dhigay iyo koritaanka waa dillaac, iyo ka dib markii ay timaado ubax. Xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso qiyaasta ubaxa ilaha kuleylka (bateriga ama kuleyliyaha fanjooga). Haddii warshadu ay u dhowdahay ilaha kulaylka, ku rid baaquli / muraayad biyo ah ama ku buufin hawada maalin kasta, isku day inaadan ku dhicin caleemaha.
Ciidda orchids waa inay ku jiraan qaybo jilicsan oo dhan (2-3 cm oo cabbirka). Haddii qolofta la jajabiyo oo u eg sida burqashada dhulka - iska tuur, sida substrate-ka oo kale uma oggolaanayo inay hawada ku sii gudubto oo ay hayso biyaha. Xaaladdan oo kale, xididdada "xiddigaha" waxay bilaabi doonaan inay kala jajabaan oo ay waxyeeleeyaan geedka. Marmarka qaarkood polystyrene ayaa lagu daraa jilif, taasoo u oggolaanaysa in si dhaqso ah loo qalajiyo biyaha ka baxsan biyaha. Coal, jejebka sphagnum iyo xididdada fermaha ayaa lagu dari karaa ciidda.
Dhexdhexaadiye fiican ayaa ah:
xakamee qoyaanka xididada;
Ha sameynin duufaan (qoyaanka waa inaysan marin waqti dheer ee taangiga);
ku dhaaf hawo (ha ahaato mid cufan leh).
Substrate noocan oo kale ah ee daryeelka "Cumbria" waxaa laga iibsan karaa dukaamo kasta oo ubax ah. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, substrate for orchids ayaa si madax banaan loogu sameyn karaa guriga.
Nidaamka xididka orchid waa mid aad u nugul. Si looga ilaaliyo duufaanka, waraabinta cimilada kulul waxaa la sameeyaa toddobaadkii hal mar, iyo roob ama qabow - mar labadii toddobaadba mar. Iyada oo waraabinta maalin walba dhirta ayaa ka baabi'in doonta biyaha badan iyo suuska. Biyaha waraabka waa in la kariyaa ama la sifeeyaa, "Cumbria" ayaa aad ugu nugul tayada biyaha. Waxa kale oo aad dhigi kartaa dheriga biyaha ilaa saacad badhkeed kadibna ku shub ubax ilaa inta ay gebi ahaan qalalan tahay.
Waa muhiim! Cumbria way fududahay in lagu dulqaado abaarta ka jirta biyaha taagan.
Inta lagu jiro koritaanka, orchid waxaa lagu bacrimiyay dhaymo gaar ah. Waxay socdaa ilaa xilliga ubax, ka dib joojinta quudinta. Iska ilaali, isticmaal qiyaasta kala badh marka loo eego xirmadda, si aanay u gubin jiilalka jilicsan "Cumbria".
Ubaxa uma dulqaadanayo isudheellada joogtada ah; haddii ay lagama maarmaan tahay, waxaa la faafiyaa mar labadii sanaba mar (marka xididdadu aysan ku dhejin dheriga, koritaankooduna aad ayuu u gaabin doonaa). Waqtiga ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'transplant' waxaa loo tixgeliyaa muddada uu jirku uusan ka muuqanin guluubka.
Tallaalka tallaabo tallaabo ah "Cumbria":
ka saar ubaxa dheriga;
nadiifi adigana xayawaan iyo jilif (haddii ay jirto wax uur leh, waxay sidoo kale u baahan yihiin in laga saaro);
gelin jilif iyo xumbo hoose ee dheriga (sidaas darteed xididada ma aha biyaha marka waraabiyo);
u dhig dhirta xagasha 90 °;
waxaan ku seexanaynaa jilif cusub, xabbado dhuxul iyo dhuxulo;
Ma mayno biyo wiigi toddobaad (sidaa daraadeed boogaha soo-gaaray ayaa bogsiinaya).
Orchid waxaa lagu dhufan karaa scythe - cayayaanka madow-brown leh qolof aad u cufan, oo u ekaa bacaha xabadka; waxay daaqada caleemaha (gaar ahaan dhallinta yar) waxayna cabtaa dhammaan juuska geedka. Ka dib marka caleemuhu noqdaan kuwo dhegdheg leh leh dheecaan macaan. Si loola dagaallamo cayayaanka waxay u baahan yihiin sunta cayayaanka gaarka ah, raacaya tilmaamaha, taas oo ku xidhan murugada guuldarada. Iyada oo cimilada wanaagsan, ubaxa ayaa lagu ridi karaa waddada (ma aha oo kaliya raajooyinka tooska ah ee qorraxda). Caarilka ubaxa waa in la beddelo.
Waxaad la dagaalami kartaa cayayaanka adoo adeegsanaya daawooyinka sida: "Aktara", "Confidor" iyo "Malathion".
Cudurka fungal iyo bakteeriyada faafa ayaa ka muuqan kara Cumbria. Si aad uga takhalustid, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho fungicides (kiimikooyinka ka dhanka ah cudurrada fangas). Daaweynta ka dib, waxaannu ku tallaalnaa ubax oo dhulka ku xiri dhuxusha. Haddii aad aragto ubaxyada cad ee caleemaha iyo afkoda of orchid, waxay u badan tahay in ay tahay shuban ee substrate ah. Daaweyn, biyo biyo la kariyey, jooji quudinta iyo bedelka ciidda. "Cumbria" - waa gardaro ubax oo cajiib ah, oo leh midabyo kala duwan. Waxay u baahan tahay biyo yar oo dhif ah, oo aan dhicin, taas oo aan si xun u adkeyn dadka magaalada deggan, kuwa jecel ubax iyo beeraley.